Ntụle atụmatụ ekwentị
Atụmatụ mkpanaka mkpanaka 10
Monday, June 4, 2012 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Na-ezube ịnabata njikọ aka na nnukwu ụzọ? Enwere ọtụtụ echiche ndị ụlọ ọrụ anaghị atụ anya ma ọ bụ rụọ ọrụ iji bulie atụmatụ ha. Gbalịa ị heeda ntị na ndụmọdụ ndị a:
Enweghị nsogbu Technology - Ọ bụ ezie na teknụzụ maka itinye aka na ekwentị abanyebeghị nke ọma, ụlọ ọrụ kwesịrị na-emebe ihe owuwu ha gburugburu igwe ojii nke na-eweta ọdịnaya, ndekọ, ntanetị mmekọrịta, data ngwaọrụ, ọrụ SaaS, nchịkọta na ndị ọzọ.
Kpọọ Iji Mee Ihe - Nke a bụ eziokwu ọbụlagodi maka ụdị njikọ aka ọdịnala nke gbadoro anya na ịgbasa ozi ma ọ bụ mmata, mana karịa maka mkpanaka mkpanaka ebe mantra maka ihe ịga nke ọma na-enye ahụmịhe ọrụ na-arụ ọrụ. Na-echigharị amamihe gị dị iche iche na-agbada ma na-echekwa ihe bọtịnụ karịa ụdị, na-etinye arụmọrụ na nzaghachi ndị ahịa nha nha ya na interface na akara.
Analytics - Designmepụta maka mkpanaka ga - ewe nnukwu mbọ nchịkọta na-aghọkarị ihe a na-atụgharị n’uche. Agbanyeghị, site na mgbagwoju anya nke ngwa mkpanaka yana ijikọ nchịkọta site na ngwa ihe nrụpụta ngwanrọ (SDKs) MA ọ bụ ijikọ ọnụ nchịkọta na animated meziri na ike peeji nke weghara ihe omume, ị ga-mkpa ịhapụ oge na mmepe kalenda gị iji nweta ihe ziri ezi.
Social Media - Site na ikike nbanye site na mkpanaka, na ntinye ngwa, na mmekọrịta mmadụ na ibe, mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ nnukwu ihe na ojiji ekwentị. Ihe ịga nke ọma kachasị na usoro ntinye aka na-adabere n'ichepụta ọrụ azụmahịa iji gbochie ndụ onye ahịa ma ọ bụ ọrụ ya kwa ụbọchị.
Obodo - SOMOLO abụghị naanị ụlọ ọrụ jargon, Obodo mkpanaka mpaghara na-akọwa ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa yana edemede aka na ụlọ ọrụ ekwentị. Ọbụlagodi na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị abụghị mpaghara, n'ụzọ ụfọdụ ijikọ ọdịdị ala n'ime usoro mkpanaka gị nwere ike ịchụpụ ọtụtụ ọrụ.
Izi ozi ederede (SMS) ka dị ndụ ma dị mma. Eledala iru ya ma ọ bụ nsonaazụ ndị enwere ike ịnweta site na mkpọsa dị mfe.
email - Yahoo! na-akọ na 20% nke ndị ọbịa niile na-eleta ugbu a na ekwentị mkpanaaka… ma anyị maara nke ahụ email mkpanaka emeghe ọnụego na-eru nso ugboro abụọ na. Ọ bụrụ na ịnọghị emebe email gị maka obere ihuenyo, na opekempe folks na-agaghị agụ… na njọ… ha nwere ike ịbụ unsubscribing.
Mobile Apps - echefula otu ngwa ndị ọzọ a na-eji agagharị agagharị dị, dị ka Facebook, Youtube, Ngwa foto, Egwu Egwu, Geolocation, wdg. Integmekọrịta ngwa ndị ọzọ na ngwa gị nwere ike ị nweta gị ọnụego ngwa ngwa ma ọ bụrụ na emechara ya nke ọma!
Obere Ihuenyo na-ebuwanye ibu… ma na-egosipụta mkpebi dị elu. Mepụta ngwa na-anabata nke na-erite uru nha ihu na mkpebi ga-abawanye ojiji na njikọ aka.
Security - Ndị na-agba ọsọ na-agha ọgụ mgbe niile iji wakpo smart phones, yana onye na-eji ihe ngwangwa eme ihe na ngwa ụlọ ọrụ gị iji webata malware na smart ekwentị bụ ihe ikpeazụ ịchọrọ.
Approzọ ndị a nwere ike ịchọ ọhụụ Chief Agagharị Agagharị onye na etinye aka na oru azumahia ya ma burukwa onye nke zuru oke izoputa atumatu aka okwesiri ighoputa ya karia “Chief Technology Officer” onye isi ngalaba oru aka oru puru iche.
Tags: mobile nyochamobile imeweahịa efumkpanaka mkpanakaatụmatụ ekwentị
Ọnụ ọnụ ma sie ike SEO nlekota oru
Vidio: Kedu ihe bụ ika?
Jun 7, 2012 na 11:12 AM
Kedụ maka nke kachasị mkpa n'ime ha niile: ọdịnaya ?!
Jun 7, 2012 na 7: 53 PM
Ihe ndị a bụ echiche ndị folks anaghị elebara anya, Michael. Agaghị m arụ ụka na ọdịnaya bụ # 1.
Jun 8, 2012 na 4:23 AM
Daalụ maka azịza gị Douglas. Ebumnuche dị iche iche ị kpọtụrụ aha bara uru. Mana na ahụmịhe m ndị mmadụ anaghị etinye uche na ọdịnaya dị ukwuu: - / Ha na-elekwasị anya na usoro, ngwa ọrụ, ọwa, wdg. Ọdịnaya dị mkpa. Ma nnukwu ọdịnaya bụ ihe niile. Daalụ & kasị mma, Michiel